शब्दकोश: फेरि फूल
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, July 09, 2011
Bed Nath Pulami July 08, 2011
यसले पनि मन नलोभ्याउने कुरै भएन धाइबा जी !
त्यो पुतली झैँ फुलमा बसिरहू लाग्यो !
niraj bhattarai July 08, 2011
la dada...photography pani nachhodeko....aba baaki k cha hau....sabaima kada roop ma prastut hunubhacha............
Sweta July 08, 2011
I think you should seriously take photography and click more beautiful pictures... i really loved these flowers... flowers are always lovely :) :)
Chaitanya July 09, 2011
बडो राम्रा फूलहरु !
दीपक जडित July 11, 2011
गजब फूलहरु ।
पुछारपट्टिबाट दोश्रो फूलले त हुरुक्कै पार्यो । खासमा फूलको पछिल्तिरको गाढा अँध्यारो भागले गर्दा मलाई अरु सबैभन्दा त्यो मनपरेको हो । अँध्यारो अनि फूल............... र त्यो तस्वीरमा उतारिनु ।
कृष्णपक्ष July 14, 2011
मन पर्ने शव्दहरु, मन हर्ने फूलहरु ।।।